Lazaina izay atao, atao izay lazaina… | NewsMada
Lazaina izay atao, atao izay lazaina…
Tsy ekena intsony ny fisian’ny fitavozavozan’ny mpikambana sasany eo anivon’ny governemanta amin’ny fanatanterahana ny vina sy ny velirano? Arahaba soa, arahaba tsara… amin’izao taona vaovao izao. Hisy fiovana sy fanovana ny fomba fiasa amin’izany? Na izany aza, araka ny hafatry ny filohan’ny Repoblika: tsy hisy ny fanovana minisitra isaky ny mihetsika, fa ela vao tena afa-miasa tanteraka sy ahitam-bokatra izay ovaina. Nefa tsy maintsy hoesorina ihany izay tsy mahavita ny asany.
Mazava izany fa tsy ananan-kavana na namana ny raharaham-pirenena, fa ny vokatra mivaingana sy azo refesina no hitsarana ireo tomponandraikitra eo amin’ny toerana nametrahana azy: iza no manao inona, aiza ary mankaiza? Mila hafainganam-pandeha izany, fa maika avokoa ny zava-drehetra. Eo ny fanarenana ny fahavoazana hatramin’izay; ny fanonerana izay tsy vita, indrindra hatramin’ny niverenan’ny Fahaleovantena no ho mankaty; ny fanorenana ho dingam-pandrosoana vaovao.
Amin’izany, tsy tokony ho fantatra sy hampahafantarina mazava amin’ny vahoaka ve izay hatao isan-tsehatra sy isan’ambaratonga? Tsy hoe mba tsy ho tompon-trano mihono fotsiny, fa eo indrindra koa izay hisian’ny faharisihana amin’ny fampandrosoana, ny fiaraha-miasa amin’izay azo atao, ny fandraisana anjara amin’izay mety ho vita… Hiharihary ho azy eo amin’izany izay tena miasa? Tsy misehoseho ho midina ifotony nefa tsy misy inona atao na vita, ohatra, na am-boalohany ihany no mody manao izany.
Lazaina izay atao, atao izay lazaina. Izay no hisian’ny fifampitokisana marin-toerana, ahavitan-javatra, maharitra… Na eo amin’ny samy tomponandraikitra izany, na eo amin’ny vahoaka sy ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Maika ny fampandrosoana ka tsy azo itavozavozana, ifampiandrasana, ifanilihana… Mby amin’ny ohabolana sinoa iray izay hoe: “Raha mampiasa olona ny tena, tsy tokony hisalasalana ny aminy; raha misalasala ny aminy ny tena, tsy tokony hampiasa azy”.